काठमाण्डौ । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको असोज २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकलेले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको ४५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कुल ५० प्रतिशत लाभांस...
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंकले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको आज(असोज २४ गते)बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.५ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कुल १५.५ प्रतिशत लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । यो लाभांस...
काठमाण्डौ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले आगामी कात्तिक ४ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि जारी पूँजीको ७ करोड ३० लाख रुपैयाँबरारको रु.१०० अंकित दरका ७ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । निष्कासन गरिने कुल सेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ६ सय कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५...
काठमाण्डौ । सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले बैंकद्वारा प्रस्तावित १२.९१३ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ३५२.४८ रुपैयाँ कायम गरेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बैंकको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता ३९८...
काठमाण्डौ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको असोज २१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको १९ प्रतिशत बोनस सेयर र ६ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांस...
काठमाण्डौ । साताको चौथो कारोबार दिन आज दुवै बीमा उपसूचक वृद्धि भएका छन्। आज निर्जीवन बीमा उपसूचक ४०६.६५ अंकले बढ्दै १२००५.९२ बिन्दुको उचाईमा पुग्यो। यो दिन जीवन बीमा उपसूचक पनि २५७.२४ अंकले उकालो लाग्दै १४८६६. ७३ बिन्दुमा पुग्यो। आज सबैभन्दा धेरै कमाउने शीर्ष १० कम्पनीको सूचीमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकेनन्।...
काठमाण्डौ । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ। लाभांसको पारितको मुख्य अजेन्डासहित कम्पनीले आफ्नो २८ औँ वार्षिक साधारण सभा आगामी कात्तिक ११ गतेका लागि डाकेको हो। कम्पनीले उक्त सभा भिडियो कन्फ्रेन्सिङका माध्यमबाट कम्पनीको कर्पोरेट अफिस (सिटी स्क्वेयर बिल्डिङ) मा गर्ने भएको छ। उक्त साधारण सभाले सञ्चालक समितिले गत...
माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटलद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । कम्पनीको असोज १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो । बैठकले आगामी कात्तिक १० गते बुधबारका दिन काठमाण्डौ पानीपोखरीमा रहेको एम्बेस्सी रेष्टुरेन्टमा बिहान ११ बजे सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सभामा...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा लाभांस प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको असोज १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको सञ्चित मुनाफबाट हाल कायम रहेको चुक्तापूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांस गरी...
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तद्वारा लाभांस प्रस्ताव
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको असोज १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको सञ्चित मुनाफबाट हाल कायम रहेको चुक्तापूँजीको २८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव...
सबैको लघुवित्तद्वारा गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस प्रस्ताव
काठमाण्डौ । सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको असोज १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको सञ्चित मुनाफबाट हाल कायम रहेको चुक्तापूँजीको ३१.०५ प्रतिशत बोनस सेयर र १.६३ प्रतिशत नगद लाभांस...
मध्यभोटकोशी जलविद्युतको आईपीओमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने
काठमाण्डौ । मध्यभोटकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आज(असोज २० गते)देखि आईपीओ निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि ९० करोड रुपैयाँबराबरको रु.१०० अंकित दरका ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । निष्कासन गरिएको सेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ५० हजार कित्ता...
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकद्वारा लाभांस प्रस्ताव
काठमाण्डौ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको आज(असोज १९ गते बसेको ४१७ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफबाट हाल कायम रहेको चुक्तापूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.०६ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कुल १३.०६...
बजारको गिरावटमा ब्रेक, बीमातर्फ रिलायन्स लाइफको सेयरमूल्य सर्वाधिक घट्यो
काठमाण्डौ । साताको तेस्रो कारोबार दिन आज दुवै बीमा उपसूचक वृद्धि भएका छन्। आज जीवन बीमा उपसूचक ३०७.६६ अंकले बढ्दै १४६०९.४९ बिन्दुको उचाईमा पुग्यो। यो दिन निर्जीवन बीमा उपसूचक पनि २६५.६८ बिन्दुमा पुग्यो। आज सबैभन्दा धेरै कमाउने शीर्ष १० कम्पनीको सूचीमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकेनन्। बीमातर्फ आज एलआईसी...
एनआईसी एशिया लघुवित्तद्वारा लाभांस प्रस्ताव
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको असोज १८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आ।व २०७७÷७८ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको ५.४१ प्रतिशत नगद लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित...